नेपालमा गाँजाको चर्चा किन र कसरी « LiveMandu
१४ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ११:४१
गिरिश खतिवडाको पोडकास्टमा र्याण्डम नेपाली यूट्यूब च्यानलका सञ्चालकसंगको कुराकानीमा गाँजा समबन्धी वार्तालाप अपलोड गरियो । जनवरी १९ मा अपलोड गरिएको यो भिडियोमा अहिले ६५ हजार लगभग दर्शक भएका छन् । अहिले नेपाली सामाजिक सञ्जाल देखि सदनहरुसम्म गाँजाको प्रयोग र त्यसको कानुनीकरणका आवाजहरु जोडदार उठिरहेका छन् । र्याण्डम नेपालीको नेपालमा गाँजाको इतिहास शिर्षकको भिडियोले पनि अब छिटै २ लाख भ्यू पाउन आँटेको अवस्था छ । विश्वमै गाँजाको कानुनीकरण र उपचारात्मक प्रयोगका कुराहरु कायान्वयन हुँदै आँउदा नेपाली समाजमा पनि केहि युवापुस्ताका अगुवाहरु यसको समर्थनमा देखिएका छन् ।
अहिले नेपालमा पनि विश्वका धेरै जसो देशरुमा झैं गाँजाको सेवन र कानुनीकरणका आवाजहरु उठिरहेका छन् । झन सांसद बिरोद खतिवडा र केहि समय अघि केशव स्थापीत अनि पूर्वाधारबिद सुर्य राज आचार्य ले नै यो कुरा उठाएपछि एकप्रकारको शान्त अभियान झैं गाँजाको कानुनीकरणका कुराहरु चलिरहेका छन् । गाँजा कानुनीकरण गर्नु या नगर्नुका विषयमा हामी पैरवी गर्न चाहँदैनौं किनभनें यो नितान्त वैज्ञानीक र कानुनी कुरा हो । लागुऔषध जुनसुकै अनि जस्तो भएपनि त्यसको रोक गर्नुपर्छ र स्वच्छ समाजको परिकल्पना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । तथापि अहिलको व्याप्त लागुऔषधका कदमहरु मा कुनै तत्व या पदार्थ ल्याएर यूवाहरुको लागुऔषध प्रयोगको जोखिम कम गर्न सकिन्छ भनें त्यसमा एकफेर नसोच्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।
यो गाँजा कानुनीकरणको कुराहरु निर्णय लिनु अघि वैज्ञानीक अनि सामाजिक तथ्यहरु बिचार गर्न जरुरी देखिन्छ । गाँजा कानुनीकरणको कुरामा यि निम्न प्रश्नहरुमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
संसारमा गाँजा सेवनले मर्ने, अरु लागू औषधले मर्ने अनि रक्सीका कारण मर्ने को संख्या कति कति छ ? अपराधका हिसाबमा गाँजा सेवन गरेर गरीने अपराध र अन्य लागू औषध सेवन गरेर गरिने अपराध कुन ज्यादा छ ? गाँजा उत्पादन कुन क्षेत्र वा देशमा बढी हुन्छ,हुन्थ्यो र सम्भावना के छ ? काठमाडौं मा नै केही नेवार जातीका बैद्यहरुले यसको प्रयोग औषधिमा गरेको इतिहास का विषयमा पनि निकै तर्कहरु चलिरहेका छन् जस्को वास्तविक सत्यता आउन बाँकी छ । । गाँजा प्रतिबन्धले नेपाल कति विदेशी औषधीमा परनिर्भर भयो ? गाँजा खुला हुँदा प्रतिबन्ध नहुँदा सम्म नेपालले पर्यटक बाट कति आम्दानी गर्थ्यो ? अहिले ती बैधानिक व्यापारी र वैद्य हरुको अवस्था कस्तो छ ? अहिले खुला गर्दा नेपालले के के लाभ लिन सक्छ ? रक्सी खुला भएर हामीले ब्योहरेका नकारात्मक कुरा बाहेक थप के के नकारात्मक कुरा आउन सक्छन ?
अब यो शिवरात्रिको आसपासको समयमा झनै यूवा पुस्ताहरुले गाँजा प्रयोगका विषयमा निकै स्ट्याटस र तर्कहरु अपलोड र अपडेट गर्न थालेका छन् । शिवरात्रिमा गाँजा सेवनलाई धार्मिक र अध्यात्मिक रुपमा महत्वका साथ हेरिएको भन्ने तर्क अनि सरकारले लगाएको गाँजा सेवन रोक शिवरात्रिमा एउटा परम्परा विरुद्धका भएके तर्कहरु पनि उठेका छन् ।
संसद सम्म छिचोलिसकेको यो तथ्य र तर्कका कुराहरु आगामि दिनमा कहाँसम्म पुग्ने हो, हेर्न बाँकी छ ।